Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nezuro nemusi weChitatu vakatumira gurukota rinoona nezvemukati menyika VaZiyambi Ziyambi kuti ritsanangurure dare kuti sei vakatumira mauto kunodzivirira mhirizhonga muna Ndira.
Bumbiro remutemo rinosungira mutungamiri wenyika kuti asume dare reparamende nechimbi chimbi nezvedanho rekushandisa mauto sezvakaitwa izvi.
VaMnangagwa vange vave nemavhiki matanhatu vasina kuita izvi zvakapa kuti gweta, vari nhengo yeMDC VaInnocent Gonese vanomirira Mutare Central vakumbire dare kuti VaMnangagwa vauye kuzotsanangura kudare kuti sei vakatuma mauto kunomisa kuratidzira.
VaGoneso vati VaMnangagwa havasi pamusoro pemutemo nedaro vanofanira kutsanangurira dare kana vaita zvinhu zvakadai.
Izvi ndizvo zvapa kuti VaZiyambi vauye kudare vachipa zvikonzero zvekuti zvainge zviri pachena kuti mapurisa ainge akurirwa nevanhu vairatidzira ndokusaka vakakumbira kuti mauto apindire.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kupomera mauto nemapurisa mhosva yekupfuura vanhu gumi nevanomwe uye kubata mamwe madzimai chibharo. Asi hurumende iri kuramba nyaya iyi ichipomera bato reMDC nevanopikisa mhosva yekuda kuipidigura.